Ukuthola i-Visio ... aka ... Abantu bayazibuza ukuthi kungani ngiku-Mac | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Mashi 28, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Abantu bayazibuza ukuthi kungani ngingasebenzisi iMicrosoft njengoba benginakho esikhathini esedlule. Abanye abantu bacabanga ukuthi yonke into ye-PC / Mac iyihlaya nje. Ngicabange ukuthi PC kuqhathaniswa Mac into bekuyihlaya nje, futhi. Kuyinto hhayi. BengikuMac manje ngokusemthethweni unyaka owodwa.
Into ebi kakhulu ngokusebenza kwi-Mac kumele isebenze nakwi-PC. Ngenza njalo nsuku zonke emsebenzini. Ngisanda kulayisha i-Vista (kusengama-bluescreen ngemuva kwe-hibernation) futhi ngidinga ukulanda nokufaka kabusha iMicrosoft Visio Standard Edition. Kulula, akunjalo? Ngikuthengile ku-Microsoft online ngakho-ke ngizovele ngiyolanda futhi, bese ngiyifaka kabusha.
Ngiya endaweni enengqondo, Isikhungo Sokulanda iMicrosoft. Kukhona i-beta ye-Silverlight yeSikhungo Sokulanda seMicrosoft ngakho ngiyayifuna! Ngimane ngithayiphe u- "Visio" enkambini ye- "search downloads". Nakhu okuza kuqala ngemiphumela eyi-119:
Uyini umphumela wokuqala obaliwe? Akuyona i-Visio nhlobo… yiyona Isengezo se-Microsoft Office sika-2007: I-Microsoft Save njenge-PDF noma i-XPS. Hhe? (Angizami nokuzama ukuthola ukuthi kungani umphumela wokuqala ubukleliswe # 31). Ngakho-ke, ngifunda futhi ngihlela futhi ngifunde futhi ngihlunge futhi ngandise ukuze ngikhombise imiphumela eyi-100… Angiyitholi i-Visio noma kuphi… ezinye izibukeli kanye neqembu lezinye izinto ezingahambi kahle.
Iya esizeni seHhovisi! Njengoba ngithenge i-Visio online, ngicabange ukuthi ngizokwazi ukubuyela esitolo ngeMicrosoft. Ngiphuthaphutha kancane, kepha ngiyakuthola… IVisio Standard Edition. Futhi kubha eseceleni yangakwesobunxele… Ukuthenga kwangaphambilini! Yahoo !!!!… er… ngiqonde ukuthi Wahooo !!! Ngichofoza ukuthengwa kwangaphambilini futhi inombolo yami ye-invoyisi iyavela. Yebo !!!! Cishe lapho !!!! Ngichofoza ukuthenga futhi yilokhu engikutholayo:
Hhawu. Ngisebenzisa i-Internet Explorer 7 ngisho… ngisho nokufaka le engozini kuFirefox. Ngisula amakhukhi ami. Ngizulazula ngibuyele emuva, ngichofoze ku-invoyisi yami… naku….
Uyamunca iMicrosoft! Vala futhi ucime iwebhu… uyanya! Manje angikwazi ukwenza iphrojekthi yami yenziwe namuhla ngesoftware ngiphoxekile ngokuthi ungenze ngathuthukisa okungibize enye i- $ 150 engingakwazi ukuyilanda nengingakwazi ukuyisebenzisa.
Abantu bayazibuza ukuthi kungani ngiku-Mac.
Akumangalisi ukuthi kungani iMicrosoft Brand yehla. Ngingamangala uma ngifunda ukuthi abasebenzi beMicrosoft kumele basebenzise nemikhiqizo yabo, ku-inthanethi noma ku-inthanethi.
Mar 28, 2008 ku-4: 05 PM
Yebo, nami ngiyagula nge-M $ crap. Ngisanda kugxuma umkhumbi ku-Outlook 07 ngaya eMozillas Thunderbird .. Ngijabule ngikwenzile. Futhi kuzofakwa i-office evulekile maduze ukuqeda yonke imfucumfucu ye-M $ office.
Ngempela ucabanga ukwenza i-leap futhi ungasebenzisi lutho ngaphandle kwe-linux kumishini yami manje. Sekusebenziseka kalula njengakamuva futhi isoftware eningi yama-winblows ine-linux ehambisanayo yalezi zinsuku.
Angiqiniseki Uma nginesibindi sokuthola i-mac tho.
Mar 28, 2008 ku-5: 36 PM
Iphupho elinjani lelo !!! Microsh * te! Lapho thina bantu sifunda…. IMicrosoft izoba senkingeni YANGEMPELA lapho umphakathi wezinkampani ngokungazelelwe uqaphela ukuthi uzokonga isikhathi nemali lapho ushintshela ku-Mac futhi uyeke ukusebenzisa imikhiqizo yeMicrosoft.
Mar 28, 2008 ku-7: 57 PM
Futhi-ke, njengoba ngifunda le ndatshana, isixhumanisi sakho se-Google Ads ezansi kokungenayo kwakho kunezixhumanisi zokuthenga i-Office 2003 ne-2007.
Nezikhangiso ze-Mac eceleni, ezixubene namanye ama-Office add ins.
Kwesinye isikhathi kumnandi ngempela ukuthi ikhodi yokukhangisa ezenzakalelayo ingavela kanjani ngezikhathi ezithakazelisa kakhulu. Okuthunyelwe kwakho kuhlanganiswe nezikhangiso "ezifika ngesikhathi" zenze ukuhlwa kwami ​​🙂
Mar 28, 2008 ku-8: 32 PM
Ha! Kuhlala kubonakala kunjalo, Bob! Noma nini lapho ngiqhumisa othile, izikhangiso zabo ziyafika kusayithi. Kuhlekisa kakhulu.
Mar 29, 2008 ku-1: 08 AM
I-Open Office ilapha i-2.4 ne-3.0 kuzoba ngcono ngisho nangesinyathelo esisodwa. Kukhona nezandiso ukuze umuntu asebenzise iLaTeX kuyo kulezi zinsuku…
Mar 29, 2008 ku-12: 23 PM
Vele usebenzise i-OmniGraffle Pro. IVisio i-bloat-tastic noma kunjalo.
Ngo-Apr 1, i-2008 ku-1: i-38 PM
Ngibe nenhlanhla enhle nge-OmniGraffle Pro futhi, uJason. Ngifisa sengathi ngabe ihambisana ngokuphelele nefayela neVisio (noma okuphambene nalokho), noma kunjalo! Nginamakhasimende asebenzisa iVisio.
Mar 29, 2008 ku-2: 36 PM
Uyazi ukuthi iMac ibingeke ibe yimbi kangaka ukube bekungebona bonke abantu beMac People. 😉
Ngo-Apr 1, i-2008 ku-1: i-39 PM
Ha! Uqinisile impela, Mike. Siyiqembu elingenalutho - ikakhulukazi abantu abanjengami ababengene shi kubuchwepheshe be-MS kumashumi amabili eminyaka edlule!
Ngo-Apr 1, i-2008 ku-12: i-53 PM
Ngibe nezinkinga ezimbalwa kakhulu ngemikhiqizo ye-Microsoft. O, ngibe nezinkinga eziningi ku-inthanethi, kepha akukho okubucayi. Ngenxa yokungathembeki okujwayelekile kwe-Intanethi, ngincamela ukuba namakhophi aqinile azo zonke izinhlelo engizithengayo, ikakhulukazi uma zibiza. Isikole esidala, ngiyazi.
Kuyahlekisa, kepha ngibe nezinkinga eziningi ngama-Macs ne-Linux kune-Windows, futhi izinhlelo zomthombo ovulekile azibonakali zisebenza nami. Impela akukhona ukungabi bikho kokwazi kwezobuchwepheshe (bengilokhu ngisebenzisa amakhompyutha kusukela ezinsukwini ze-DOS).
Futhi, kungani abantu befaka abalingiswa lapho bebhala "iMicrosoft"? Ngiqonde ukuthi, akunjengokungathi ukupela isipelingi ngandlela thile kuzokwengeza amandla kaBill Gates angcwele wokubusa umhlaba. Kubukeka nje kusile.
Ngo-Apr 1, i-2008 ku-1: i-48 PM
Lokhu okuthunyelwe bekuyindawo enkulu enkulu yokuphazamiseka ngenxa yokukhungatheka kwami ​​ngesayithi labo. Ngicabanga ukuthi ukuxhumana ukuthi iMicrosoft inqanyuliwe ngandlela thile nabasebenzisi bayo. Udaba lwami lwalungemayelana nesoftware (ngalesi sikhathi;), lwalumayelana nensizakalo yamakhasimende empeleni.
Uma nje ngikhumbula, bekulokhu kunjalo. IMicrosoft ibingafinyeleleki ngandlela thile futhi isinqumele inkomba… izinto ezifana nokuba nesiphequluli esingasebenzisi amazinga, ukwakha amamodeli okuphepha asebenza kuphela nezinhlelo ezisuselwa kwiMicrosoft, nokungazinaki ezinye izindinganiso - njengezindinganiso zamadokhumenti.
Ngibahlonipha kakhulu abakuzuzile, kepha ngikholwa ukuthi ubutha babo kunoma ngubani osemkhathini uthola okungcono kakhulu kubo. Ukubuka okukodwa ividiyo kaSteve Ballmer kuyangichaza!
Ungangizwa kabi, uJob unezikhwama zakhe, naye. Uyimpisi uma ufunda umagazini wakamuva Wired. Kepha ngicabanga ukuthi ukunaka kwakhe kugxile kakhulu ekushintsheni isimo se-quo nokuzama ukwenza izinto zibe lula futhi zibe nesitayela 'sehlelo' lakhe.
Ngo-Apr 14, i-2008 ku-4: i-59 PM
Inothi nje, iMicrosoft ilandele nge-imeyili ephathelene nokulanda kwami ​​namuhla, 4/14/2008 enesixhumanisi sokulanda kanye nokhiye womkhiqizo ongawufaka.